NY FOMBA AZY - WTE FIKAMBANANA - World Trade Exchange
AHOANA NY ASA!
mangataka sy mandoa wte
Ny dingana voalohany hahatongavana a WTE mpikambana dia mifidy iray drafitra ho mpikambana ary ampiharo eto na andefaso mailaka izahay miaraka amin'ny anaranao feno, ny adiresy mailaka, ary ny drafitra maha-mpikambana tianao hisoratra anarana. Rehefa vita ny taratasy fangatahana mpikambana, halefanay aminao ny antsipirian'ny fandoavam-bola mba hanaovanao ny fandoavanao. Takiana aminao ny fandoavana ny saram-pandraharahana mifanaraka amin'izany amin'ny alàlan'ny antsipirian'ny fandoavam-bola nalefa taminao ary handinihana ny fandinihana tsara.
Vantany vao voamarina ny fandoavam-bola maha-mpikambana anao, dia hanangana ny kaonty orinasa izahay hanombohana anao!
FAMERENANA WTE Drafitra ho an'ny mpikambana
CLICK ETO MBA HANGATAKA WTE MPIKAMBANA
VOASAINA NY kaonty
mahazo kaonty miaraka amin'ny $ 10m ka hatramin'ny $ 50b amin'ny trosa varotra
WTE dia hanangana ny kaonty orinasa anao ary hanome azy $ 10M ka hatramin'ny $ 50B, arakaraka ny drafitra maha-mpikambana anao nisoratra anarana.
Ity dia lisitry ny trosa izay tsy mila averinao intsony raha tsy WTE manampy amin'ny famoahana ny vola miditra ilaina amin'ny varotra hanefana ny trosa. Ny tsipika momba ny trosa dia ahafahanao manomboka mividy, mandoa ary mampiasa vola amin'ny alalàn'ny WTE. Azonao atao ny manonitra ny fandanianao vola amin'ny ho avy miaraka amin'ny trosa azonao.
Raha vantany vao tafapetraka ny kaontinao ka omena $ 10M ka hatramin'ny $ 50B dia ho azonao ny kaontinao amin'ny kaontinao avy amin'ny Account Manager anao.
mahazo ekipa fitantanana orinasa 'vita ho anao'
Hanendry ekipa mpitantana orinasa misy mpiasa 100 izahay natokana hitantana ny kaontinao sy hanampy anao hahazo tombony betsaka avy amin'ny WTE maha-mpikambana.
Ny ekipa voatendry anao dia hanao 100% amin'ny asa takiana mba hanampiana anao hahatratra ny tanjonao amin'ny anaranao. Tsy mila asa, fotoana, ezaka, na loza mety hitranga eo aminao mba hananana fidiram-bola na hahitana vokatra.
Ny ekipa fitantanana orinasa dia ahitana ireto manaraka ireto: Mpanadihady momba ny asa, Mpanolo-tsaina, Mpivarotra varotra, mpikirakira fandoavam-bola, mpitantana varotra, mpitantana fahombiazan'ny mpanjifa, mpitantana entana sy mpitatitra entana, mpitantana Offset, mpanohitra, mpivarotra mpivarotra, mpitantana Buyback, mpivarotra offset, mpiasan'ny marketing, Mpitantana banky, mpisolovava, mpitan-kaonty, mpanolo-tsaina momba ny hetra ary mpitantana vola.
MILA ANALISA NY BUSINESS
Ny ekipa mpitantana orinasa dia hitarika "Analysis ilain'ny orinasa" amin'ny orinasanao. The "Business Needs Analysis" dia natao hanampiana anay hamantatra sy hamakafaka ny tanjon'ny orinasa, ny drafitra, ny filanao, ny fanamby, ny enti-miasa, ny fandaniam-bola mahazatra sy ny ho avy, ny fanoloran-tena eo amin'ny fiaraha-monina, ny tanjon'ny fampiasam-bola ary ny nofinofy hanatsara ny fomba fiainana. Takiana aminao ny hanome ireto ekipa ireto ireto fampahalalana manaraka ireto: A. Fandaharam-potoana fividianana 12 volana: Ity dia antontan-taratasy izay hitanisa ny fananana, ny vokatra ary ny serivisy tianao hividianana anao ho anao sy ireo fampiasam-bola hafa azonao te-hanao anay amin'ny anaranao izahay. Fandaharam-pivarotana B 12 ka hatramin'ny 36 volana: Ity dia antontan-taratasy izay hitanisanao ny lisitry ny fananana, vokatra ary serivisy tadiavinao WTE hanampy anao hivarotra mandritra ny 12 ka hatramin'ny 36 volana.
manorata vahaolana SOLUTIONS sy fampiharana
Rehefa avy nanome ny ekipanao ny antsipiriany momba ny tanjon'ny orinasanao ianao, ny drafi-pandraharahana, ny filàna, ny fanamby, ny loharano, ny lisitry ny fiantsenana, ny teti-bola ary ny fandaniam-bola rehetra mitohy WTE ekipa dia hanolotra ny vahaolana tsara indrindra, ny tombotsoan'ny mpikambana, ary ny drafitra fampiharana mba hanampiana anao hahatratra ny tanjonao haingana kokoa noho izay noheverinao fa mety! Lazao aminay ny tanjonao ara-bola, dia hanamboatra vahaolana azo antoka izahay hanampiana anao hahatratra azy.
APPROVe vahaolana sy drafitra
Halefanay aminao ny vahaolana voatondro, ny tombontsoa ho an'ny mpikambana, ary ny drafitra fampiharana.
Takiana aminao ny sonia ny fifanarahana ara-barotra misy ny vahaolana voatondro, ny tombotsoan'ny mpikambana, ary ny drafitra fampiharana mba hanampiana anao hahatratra ny tanjonao.
MAHATONGA NY Tanjonao
Raha vantany vao nankatoavanao ny vahaolana voatondro, ny tombotsoan'ny mpikambana, ary ny drafitra fampiharana, ny WTE Ekipa mpitantana orinasa dia hanao 100% amin'ny asa fampiharana takiana mba hanampiana anao hahatratra ny tanjonao.
Ohatra, raha ny hanangana orinasa mpamokatra entana nefa tsy misy vidiny mialoha ho anao ny tanjonao, WTE dia hanome crédit tsy misy zanabola sy hampiasa ny haren'ny mpikambana hafa ao anatin'ny WTE tambajotra hanampy anao hahatratra ny tanjona.
Na ny tanjonao dia ny mahazo orinasa efa niorina na trano tsy misy vidiny mialoha ho anao, manaova ROI 10,000%, ampitomboy 10,000 30% ny vola miditra amin'ny varotra ao anatin'ny 100 andro, aloavy ny trosa amin'ny vidiny aotra, amidio ny fanisana $ 24B ao anatiny 90 ora, ahenao hatramin'ny 30% ny fandanianao vola, na miverena amin'ny orinasa mitolona ao anatin'ny XNUMX andro, WTE afaka manampy anao hahatratra ny tanjonao rehetra haingana kokoa noho izay noeritreretinao fa mety.
Tsy mila asa, fotoana, ezaka, na risika eo aminao mba hahatratrarana tanjona na valiny satria VITAN'NY ZAVATRA REHETRA!
Toy ny orinasam-pifandraisana rehetra, WTE mahazo komisiona vola 5% isaky ny fifanakalozana.
MANAO Fividianana vola sy fampidiram-bola
WTE hampiasa ny trosa ao amin'ny kaontinao mba hahazoana antoka ireo fifanarahana fifanarahana avy amin'ireo orinasa lehibe amin'ny anaranao mba hanampiana anao hividy ny fananana rehetra, ny trano, ny orinasa, ny vokatra ary ny serivisy amin'ny lisitry ny fividiananao / lisitry ny varotra.
WTE dia hanampy amin'ny fanefana ny vidin'ny asa ataonao isan'andro, fandaniambola, fividianana lisitra, fampandrosoana ny vokatra vaovao, fandaniana amin'ny marketing, fanitarana ny fahafaha-mamokatra, fandaniana amin'ny raharaham-barotra sy manokana hatramin'ny vola ao amin'ny kaontinao.
Noho izany, tsy mila mandoa ny vidin'ny orinasa raikitra na miverimberina ianao avy amin'ny tahirinao. Tsy mila manelingelina ny tenanao momba ny toerana sy ny fomba fandanianao ny vola ao amin'ny kaontinao ianao. Vita ho anao daholo izany.
VITAN'NY ZAVATRA REHETRA!
WTE Moa ve ny asa rehetra ho anao, ao anatin'izany ny fanomezana ny trosa tsy misy zana-bola ilaina amin'ny fividianana ny entana rehetra ao amin'ny lisitry ny fiantsenana, fifampiraharahana amin'ireo mpivarotra, fiantohana ireo fifanarahana famatsiana avy amin'ireo orinasa lehibe ho anao, ny fandoavana ny mpivarotra ary ny fanamorana ny fifanakalozana mba hiantohana ny fandefasana ara-potoana ny fananana, vokatra ary serivisy novidina tamin'ny anaranao. 100% ny asa vita ho anao.
ADIDIN'NY OFFSET Mifanaraka amin'ireo tombony azo!
Ho an'ny tsirairay WTE ny tombotsoan'ny mpikambana dia misy adidy offset. Ny fametrahana dia ny fanatanterahana ny adidy offset ara-dalàna mifandraika amin'ny tanjona WTE nanampy anao hahatratra na ireo tombontsoa / serivisy azonao avy amin'ny WTE.
Ohatra, raha nanao fividianana $ 100M sy fampiasam-bola ianao amin'ny alàlan'ny trosa tsy misy zana-bola nomen'ny WTE, tsy takiana aminao ny handoavana vola amin'ny fotoana rehetra. WTE dia hanampy anao hamerina ny trosan'ny trosa amin'ny famokarana $ 100M amin'ny vola miditra dia ilaina hanonerana izany. Na izany aza, takiana aminao ny manefa ny $ 100M ny kaomandin'ny varotra ateraky ny WTE mandra-pandoavana ny trosa omena anao. Ny fizotry ny fanatanterahana ny kaomandan'ny varotra novokarin'i WTE mandra-pandoany ny trosanao dia antsoina hoe "SETTLEMENT.